Wararka SUUQA: Newcastle Oo Saxeex Weyn Qarka U Saaran, Barcelona Oo Weeraryahan Heshay & Lukaku Oo Go’aankiisa U Sheegay Chelsea – Radio Somit
Wararka SUUQA: Newcastle Oo Saxeex Weyn Qarka U Saaran, Barcelona Oo Weeraryahan Heshay & Lukaku Oo Go’aankiisa U Sheegay Chelsea
Real Madrid, Paris St-Germain, Bayern Munich iyo Juventus ayaa dhammaantood wadahadalo la furay wakiilka daafaca dhexe ee Chelsea ee Antonio Rudiger si ay heshiis hordhac ah ula sii gaadhaan xilli qandaraaskiisa Blues dhacayo dhammaadka xilli ciyaareedkan. (Sky Sports)
Lille ayaa u sheegtay Newcastle in daafaca dhexe ee Sven Botman uusan iib ahayn kaddib markii ay heshiis 30 Milyan oo pound ah ka wada hadleen
Newcastle ayaa horumar ka samaysay saxeexa daafaca midig ee kooxda Atletico Madrid ee Kieran Trippier oo ay ku dhaw yihiin inay kula soo wareegaan 25 Milyan isla markaana noqon kara saxeexoodii koowaad. (Express)
Newcastle ayaa Lyon kula tartamaysa saxeexa weeraryahanka kooxda Zenit St Petersburg ee Sardar Azmoun.
Chelsea wadahadaladii heshiis kordhinta ee ay kula jirtay Andreas Christensen ayaa markale istaagay, Barcelona ayaa xiisaynaysa saxeexiisa xilli heshiiskiisu dhacayo dhammaadka xilli ciyaareedkan. (Gianluca di Marzio – in Italian)
Romelu Lukaku ayaa u sheegay tababare Thomas Tuchel inuusan qabin wax dareen ah oo uu kooxda kaga tagayo walow uu sheegay inuusan ku faraxsanayn xaalada kooxda kaddib waraysi uu siiyay Sky Italia.(Times – subscription required)
West Ham ayaa wadahadalo la yeelatay Gabriel Barbosa iyadoo doonaysa inay kala soo saxeexato Flamengo. (Sky Sports)
Roma ayaa Arsenal u gudbisay dalab ay ku doonayso Ainsley Maitland-Niles oo amaah ah oo sidoo kale ogolaanaya inay xagaaga la wareegi karaan. (Athletic – subscription required)
Daafaca midig ee Nathan Patterson ayaa tijaabada caafimaadka u maraya Everton kaddib markii Rangers ay aqbaleen heshiis 12 Milyan oo pound ah oo lagu daray 16 Milyan oo pound. (Football Insider)
AC Milan ayaa ku jirta wadahadalo ay Renato Sanches kagala saxeexanayso kooxda Lille. (Calciomercato – in Italian)
Luis Suarez oo heshiiskiisa Atletico Madrid dhacayo dhammaadka xilli ciyaareedkan ayaa filaya inuu ka tago kooxdaas waxaana uu ku rajo weyn yahay inay Lionel Messi ku midoobi doonaan kooxda ree Maraykan ee Inter Miami. (El Nacional – in Catalan)
Alvaro Morata heshiiska uu ugu wareegayo Barcelona ayaa 95% dhammaystiran waxaana ay Barca heshiis la gaadhay Juventus oo uu haatan amaah kula joogo isaga oo ka maqan kooxda Atletico Madrid. (AS – in Spanish)
Barcelona ayaan wax kulamo ah la qorshaynin Ousmane Dembele oo heshiiskiisa kooxdu dhacayo dhammaadka xilli ciyaareedkan xilli uusan wali go’aan ka gaadhin mustaqbalkiisa kooxdaas. (AS – in Spanish)
Coutinho ayaa u sheegay Barcelona inuu doonayo inuu kooxda ka tago dhammaadka xilli ciyaareedkan (Sport – in Spanish)
Bournemouth ayaa Man United kala heshiisay saxeexa Ethan Laird oo ay qaab amaah ah ku qaadanayaan qaybta dambe ee xilli ciyaareedka, da’yarkaas daafaca midig ayaa qaybtii hore wacdarro kusoo dhigay kooxda Swansea City. (Football Insider)
By radiosomit.com January 4, 2022 Uncategorized
Ralf Ragnick Oo Ka Hadlay Fursadaha Kooxdiisa Ee U Soo Bixitaanka Champions league Xilli Ciyaareedka Dambe